WOWOW2पप-अप ड्रेनको साथ गोल्डन फराकिलो बाथरूम सिंक नल ह्यान्डल गर्नुहोस्
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW2ह्यान्डल गोल्डन फराकिलो बाथरूम सिंक नल पप-अप ड्रेनको साथ
संक्षेपमा सुनौलो फराकिलो बाथरूम नलका फाइदाहरू:
आधुनिक र सरल बेसिन नल: एक ब्रश र सुनौलो फिनिशले तपाइँको बाथरूमलाई भद्र र रमणीय बनाउँदछ र तपाइँको दैनिक जीवनमा क्षय र जंगको प्रतिरोध गर्न मद्दत गर्दछ।
--होल माउन्ट -3-१-6 इन्च चौडा डिजाइन: बेसिनको आवश्यकतामा स्थापना दूरी समायोजित गर्न सकिन्छ। उच्च सिलिंग सिरेमिक कार्ट्रिज र पानी बचत।
प्रयोग गर्न सजिलो: दुई ह्याण्डलहरू, degrees 360० डिग्री घुमाउने उच्च स्पउट डिजाइन, सुविधाजनक र सटीक मात्रा र पानीको तापमानको नियन्त्रण। एन्टि-ड्रिप प्रदर्शनको साथ उच्च-सिलिंग सिरेमिक इंक कारतूस। र पानी बचत NEOPERL aerator सुसज्जित छ।
सजिलोलाई स्थापना: मूल द्रुत-जडान संरचना स्थापना गर्न सजिलो छ, र तपाईं एक प्लम्बर बिना नै आफैंले वाशबासिन नल स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। प्लम्बिंग स्थापना शुल्क बचत गर्नुहोस्! प्याकेज मिलान पप अप ड्रेन र cUPC पानी आपूर्ति लाइनहरूको साथ आउँदछ।
ग्राहक सेवा:--वर्ष सीमित वारंटी र ग्राहक समर्थन प्रस्ताव गरिएको छ। यो-०-दिन वापसी द्वारा कभर गरिएको छ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
WOWOW नयाँ अपग्रेड गोल्ड बाथरूम नल
- - १ inch इन्च बाथरूम बेसिनका लागि फिट।
प्रीमियम ब्रासको बनाइएको र आधुनिक डिजाइनको साथ चित्रित।
दुई-ह्यान्डल डिजाइन पानी मात्रा र तापमान नियन्त्रण गर्न सजिलो छ
एर्गोनोमिक्स डिजाइनमा सिधा ह्यान्डलहरू, उपयुक्त आकार जुन नियन्त्रणको लागि उपयुक्त छ, घुमाउन सहज छ।
कम कुञ्जी लक्जरी ब्रश सुनको सतह अद्वितीय उच्च टाउको डिजाइनको साथ। तपाईको बाथरूम अपडेट गर्न यो उत्तम विकल्प हो।
फिट भाँडा घर, नयाँ कन्डो, एकल अपार्टमेन्ट, मोटर होम, यात्रा ट्रेलर, आरभी सिंक, र परिवार प्रयोग।
विशेष ब्रास कार्ट्रिज
ठोस ब्रास निर्माण
In ईन्च फराकिलो
H होल डेक माउन्ट
विशेष हटाउन योग्य Aerator
एक उच्च प्रदर्शन नियोपरल एरेटरले सहज प्रवाह प्रदान गर्न सक्छ, %०% भन्दा बढी पानी बचाउन सक्छ।
एरेटर डिटेकेबल छ, तपाईं यसलाई सफा वा सजिलैसँग बदल्न सक्नुहुन्छ।
Tucai पानी आपूर्ति लाइनहरु संग आउँछ
Tucai मिलियन डलर वैश्विक बीमा कभरेज संग पानी आपूर्ति hoses।
लीड-फ्रि (०.२0.25% भन्दा कम सीसा सामग्रीसँग), CUPC द्वारा IMPAO, NSF 61 (खानेपानी स्वास्थ्य प्रभावहरू)।
१ x उच्च चाप टाउको; २ x ह्यान्डलहरू
१ x Y आकार द्रुत कनेक्टर नली
२ x cm० सेमी cUPC पानी पाइप;
१ सामानको सेट
१ x पप अप ड्रेन स्टपर
SKU: 2320300G विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: १ Hand ह्यान्डलहरू, बाथरूम बेसिन नल, व्यापक
11.69 x 10.04 x 3.11 इन्च
यो एक महान नल हो! मेरो मालिक बाथरूमको लागि मैले अरू दुई कुरा गर्ने थिए तर म ती सबै एकै भएको चाहन्नँ।
उत्कृष्ट नल समग्रमा राम्रो देखिन्छ र धेरै राम्रो गुण जस्तै महसुस गर्दछ।
सेट स्क्रूलाई कडा बनाउन निश्चित गर्नुहोस् यद्यपि प्लम्बरले उनीहरूमध्ये एक जना गर्‍यो र ह्यान्डलहरू सबै ढीला र डगमगाइरहेका थिए। अर्को प्लम्बरले मलाई देखाए कि कसरी तिनीहरूलाई कडा पार्ने जब तिनीहरू छुट्टै काम समाप्त गर्न फर्किए।
यद्यपि उत्कृष्ट नल। अत्यधिक सिफारिस गर्नुहोस्।